Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 22 ndinotsvagawo murume ari pachokwadi asina chirwere | Kwayedza
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 22 ndinotsvagawo murume ari pachokwadi asina chirwere
19 Jun, 2015 - 00:06	 2015-06-19T00:20:22+00:00 2015-06-19T00:00:09+00:00 0 Views
NDINOKUTENDAI veKwayedza ndakamuwana wandaidisisa saka vamwe ngavachirega kufona pa0715 156 128.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 35 nevana vana 2, ndinodawo shamwarirume ine makore 40 – 45. Vari chokwadi ndibatei pa0775 614 557, zvizhinji tozotaura.
Ndiri mukadzi ane makore 27, ndine chirwere, handina mwana uye ndiri kutsvakawo murume ane makore 28-30. Nhare yangu 0775 376 171.
Ndiri mukadzi ane makore 39 nevana vatatu ndinodawo murume ane makore 39 kusvika 60 anoshanda. Vanoda zvekutamba musafone zvenyu, nhare yangu 0782 169 445.
Makadii henyu? Ini ndiri mukomana ane makore 27, HIV positive uye ndinotsvaga musikana kana mukadzi ane mwana mumwe ane makore 21 zvichikwira ari HIV+. Ndapota ndinoda anotya Mwari anoshanda uye achigara muHarare. Ane rudo chairwo ave kuda zvemba andifarira anondibata pa0772 704 345, ndatenda.
Makadii veKwayedza? Pamberi nekugona basa! Ini ndiri mukomana ane makore 20 ekuberekwa ndotsvakawo musikana wekushamwaridzana naye kusvikira pakuroorana ane makore ari pasi pe20. Akazvipira kunotorwa ropa uye anotya Mwari ngaandibate pa0776 263 862 asi mvana kwete.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi ane makore 22 zvichidzika. Ari HIV negative akasununguka kundibata kana kutumira sms pa0773 868 114.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 22 ndinotsvagawo murume ari pachokwadi asina chirwere. Ngaandibate pa0779 201 718.
Makadii? Ndiri murume ane makore 25 nemwana mumwe ndotsvagawo mukadzi ane mwana ane makore 21 kusvika 23 ari mugari wekwaRusape. Vanoda ndibatei pa0783 784 115.
Makadii veKwayedza? Ndakambonyorera shambadzo yangu asi haina kubuda saka mukabudisa ino iyi ndingafare chose. Ndiri mukadzi ane makore 19 nemwana 1, ndodawo murume anoda zvekuroora ari pachokwadi ane makore 27 kusvika 30. Vari muchiuto nemapositori kwete musafona. Andida ngaandibate pa0776 623 478.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 31 nemwana 1, HIV positive uye ndiri kutsvagawo murume anoda zveimba kwete kutamba neni ane makore 34 – 40. Ndinoshanda mumba, vanoda fonai pa0716 442 874.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32 nemwana 1, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ane makore 36-39. Vari pachokwadi chete vasina vakadzi ndibatei pa+27 832 076 644, ndiri kuSouth Africa.
Tinotenda veKwayedza nekubasa guru ramuri kuita rekudzidzisa veruzhinji pamwe nevana vechikoro ChiShona chakanaka. — Mashayamombe Makeyi, Mubaira Mhondoro.
Ndiri murume ane makore 35 ndinotsvakawo mudzimai wekuroora ane makore 23 kusvika 32 ane mwana kana asina. Nhare yangu 0775 474 622.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi ave kuda zvemba ane makore 24. Nhare yangu 0717 290 393.
Ndiri murume ane makore 47 nevana 3, ndinoshanda uye ndiri murimi weA1. Ndinotsvagawo mudzimai wekushamwaridzana naye ane makore 20- 40. Nhare yangu 0775 552 579.
Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana vaviri ndinotsvagawo murume anoda zvemba ane makore 39-50. Ndiri HIV positive, nhare yangu 0734 478 024.
Ndiri murume ane makore 28 ndinodawo mukadzi wokuroora ane mazirudo asina chirwere. Ndinoshanda, anoda ngandibate pa0782 032 026.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 40 nevana 2, HIV positive uye ndiri kutsvagawo murume ane makore 45-55 anoda zvemba asi matsotsi kwete. Anoda ngaafone pa0782 003 034.
Ndiri murume ane makore 34 ndinotsvaga mukadzi ane makore 30 zvichidzika ane mwana 1 kana asina. Ini handina mwana, anoda anondibata pa0737 811 108.
Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 22 ave kuda zvekuroorwa. Anondibata pa0779 695 482.
Ndine makore 42 ndinotsvagawo murume ane makore 45 zvichikwira ari HIV positive anoshandawo nokuti ini ndinoshanda. Ngaave murefu, ini ndiri mutete. Matsotsi nevanonyepa kwete, asina mukadzi ngaandibate pa0773 577 138.
Ndiri murume ane makore 42 nevana 3, ndiri kutsvaga mudzimai ane makore 26 kusvika 35 ari HIV negative. Nhare yangu 0774 826 818.
Ndiri murume ane makore 32 ndinodawo shamwari yechikadzi ine makore 25-30 ine utano hwakanaka seniwo. Anondida ngaandibate pa0717 510 760.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 37 ndinodawo mukadzi akavimbika asina chirwere anobvuma kuongororwa ropa. Ngaave ari pachokwadi kwete anoda zvekutamba. Ndinoshanda, anoda ngaandibate pa0773 484 459.
Ndiri murume ane makore 35 ndinotsvakawo musikana wekudanana naye ane makore 18-34. Ari pachokwadi ngandibate pa0774 529 553.
Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana 2, ndiri HIV positive uye ndinotsvagawo murume ari positive seni wokushamwaridzana naye ane makore 39 zvichikwira. Andifarira ngaandibate pa0734 478 024. Ndatenda zvangu nechirongwa chenyu veKwayedza, murambe makadaro.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaga musikana ane makore 24 zvichidzika wekuroora. Anoshanda ngaandibate pa0782 863 008.
Makadini veKwayedza? Ndine makore 27 nemwana mumwe uye ndiri kudawo murume ane rudo aine vana vake vaviri kana vatatu asi ari HIV positive. Ngaave asingaratidzi kurwara nekuti ini handioneki zvachose. Nhare yangu 0777 691 372.
Makadii? Ndiri murume ane makore 37 ndinoda mukadzi akavimbika anoda zvemba asinganyepi. Nhare yangu 0773 484 459.
Ndiri mukadzi ane makore 42 ndinoda murume asina mukadzi ane makore 50 zvichikwira, anoda kunotorwa ropa uye akafirwa. Nhare yangu 0717 042 488 asi zvevanonyengedza kwete.
Ndiri musikana ane makore 18 ndinotsvagawo mukomana wezera rangu. Anondida anondibata pa0776 217 383.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 21 nevana 2 ndotsvagawo murume ane makore 26 kusvika 30 anoda zvemba. Nhare yangu 0734 646 800.
Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 2, ndotsvagawo murume akavimbika anoda zvemba asina mukadzi uye anotya Mwari. Andifarira ngaandibate panhare inoti 0715 113 594.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndodawo musikana wekudanana naye ari pachokwadi ari HIV negative. Ndiri pachokwadi, nhare yangu 0777 515 991.
Ndiri murume ane makore 40, ndinoda mukadzi ane rudo wekuroora ane mwana kana asina. Ndinoshanda kuMozambique, vanoda 00258 872 413 043.
Ndiri murume ane makore 35 ndinotsvaga mudzimai anoda imba anoshanda. Ini ndinoshanda muHurumende, nhare yangu 0773 350 202.
Makadii? Ndiri murume ane makore 44 ndoda mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 43 ane mwana kana asina. Anoziva nhamo nerugare ngaandibate pa0772 512 708.
Ndiri mukadzi ane makore 31 nemwana 1, HIV positive uye ndinotsvaga murume anoda zvemba kwete kutamba ane makore 33 – 40. Ndinoshanda mumba, ane rudo ngaafone pa0716 442 874.
Ndiri musikana ane makore 20 ndinotsvagawo mukomana ane makore 23 kusvika 26 asina chirwere. Nhare yangu 0771 138 662.
Ndiri murume ane makore 43 ndinodawo mukadzi akarongeka. Ini ndinoshanda uyezve ndinotamba nevhu. Zvakawanda tinozotaura panhare yangu 0771 487 208.
Ndiri murume ane makore 48, ndinodawo mudzimai ane makore 30 anoda zvemusha. Basa ndinoita remawoko, mwana wangu akashaya ndokusiyana namai vacho. Vanoda ndibatei pa0776 330 570.